Qaraxyo Ciidamada AMISOM iyo Kuwa DF-ka Lagula Beegsaday Muqdisho iyo Sh/Hoose.
Wednesday September 27, 2017 - 20:20:03 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa ciidamada shisheeyaha AMISOM kasoo gaaray weerar qarax ah oo markale lagula eegtay deegaan katirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Wararka ka imaanaya wadada laamiga ah ee xiriirisa degmooyinka Baraawe iyo Buula Mareer ayaa sheegaya in Miino lagu aasay wadada hareeraheeda ay ku qaraxday gaari nuuca gaashaaman ah oo ay la socdeen ciidamada Uganda.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxu uu burburiyay gaari Taaw ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamo katirsan AMISOM, Meydka Hal Askari iyo dhaawacyada tiro kale ayaa lageeyay saldhigga ciidamada AMISOM uga suganyihiin degmada Buula Mareer.
Dhinaca kale weerar loo adeegsaday Bambaanooyin ayaa caawa fiidkii lagu qaaday saldhigga Booliska degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta qaraxyo ka dhashay Bambaanooyinka.
Markii qaraxyadu dhaceen kadib ayay ciidamada Booliska DF-ka Rasaas xooggan fureen balse lama oga khasaaraha ka dhashay weerarka, xalay ayay aheyd markii xaafadda Macalin Nuur ee degmada Dharkeynleey lagu dilay mid kamida ciidamada Booliska Dowladda Federaalka.